FBSစတား ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် အနိုင်ရရှိသူများအား ကြေညာပေးလိုက်ပါပြီ
FBSစတားပြိုင်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးသွားပါပြီ! ကျွန်တော်တို့ တီရှပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည့် မြောက်များစွာသော ဓာတ်ပုံတွေကို ကမ္ဘာအနှံမှ ပေးပို့လာတာကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်. ပေးပို့လာကြသည့် ဓာတ်ပုံအားလုံးမှာ တစ်မျိုးစီလှပကောင်းမွန်ထူးခြားနေရာ ဆုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်. သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် အောက်ပါပုံတို့ကို ရွေးချယ်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်:
ထို့ပြင် ဒိုင်အဖွဲ့မှရွေးချယ်ပေးသွားခဲ့သည့် အထူးဆုအမျိုးအစား ၁၂ခုတွင် ဆုရရှိသူတို့ကို ဒေါ်လာ၅၀စီအသီးသီးဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး FBSအဖွဲ့သားများအားလုံးမှ ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်!
ဆုရရှိခဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားလိုပြီး စိတ်ဝင်တစားနှင့် ဓာတ်ပုံများကိုဝေမျှပေးပို့ကာ ပါဝင်ဆင်နွှဲပေးတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်! နောင်လာမယ့် ပွဲတွေကို သေချာစောင့်ကြည့်ပြီး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အံ့အားသင့်ဖွယ် ဆုလက်ဆောင်များ ရယူလိုက်ပါ.